कमाइ र लोकप्रियतामा विराटले सलमान खानलाई पछि पारे, कसले कति कमाए ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/कमाइ र लोकप्रियतामा विराटले सलमान खानलाई पछि पारे, कसले कति कमाए ?
एजेन्सी– भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले कमाइ तथा लोकप्रियतामा बलिउड स्टार सलमान खानलाई पनि पछि पारेका छन् ।
फोर्ब्स म्यागजिनले तयार गरेको भारतका १०० हस्तीहरुको सूचीमा यसपटक विराट कोहली पहिलो नम्बरमा आएका हुन् । सूचीनमा पछिल्लो तीन वर्षमा सलमान खानको नाम सबैभन्दा माथि थियो ।
यससँगै विराट यो सूचीमा पहिलो नम्बरमा हुने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।
सूचीलाई विज्ञापनबाट हुने कमाइ र उनको लोकप्रियताको आधारमा तयार गरिने गरिएको छ ।
फोर्ब्सका अनुसार २५२.७२ करोड रुपैयाँ कमाइका साथ विराट सबैभन्दा माथि रहेका छन् । दोस्रो नम्बरमा अक्षय कुमार छन् । जसको कमाइ २९३.२५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ज्यादा कमाइका बाबजूद लोकप्रियताको मामलामा विराटभन्दा कमजोर हरका कारण अक्षय दोस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
२२९.२५ करोड रुपैयाँ कमाइका साथ सलमान खान यस पटक तेस्रो नम्बरमा पुगेका छन् ।
अमिताभ बच्चन तथा एमएस धोनी क्रमश चौथो र पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । उनीहरुको कमाइ क्रमश २३९.२५ करोड र १३५.९३ करोड रहेको छ । छैठौं र सातौं स्थानमा क्रमश शाहरुख खान र रणवीर सिंह रेका छन् । उनीहरुको कमाइ क्रमश १२४.३८ करोड र ११८.२ करोड रहेको छ ।
टप टेनमा दुई जना महिला पनि अटाएका छन् । जसमा ५९.२१ करोडका साथ आलिया आठौं र ४८ करोड रुपैयाँका साथ दीपिका पादुकोण १० औं स्थानमा रहेकी छिन् । पूर्व क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर ७९.९६ करोड रुपैयाँ कमाइ गर्दै ९ औं स्थानमा रहेका छन् ।
क्युट सुहाना (फोटो फिचर)